तीन कम्पनीका शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौँ : धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न तीन कम्पनीका शेयर लाभांश सूचीकृत गरिएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेन्ट्रल फाइनान्स लिमिटेडको ६ लाख ६३ हजार ८४६ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएका छन् । यस्तै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १ लाख ५२ हजार ५५३ कित्ता शेयर लाभांश र मेगा बैंकको १० लाख ३० हजार ९४८ कित्ता शेयर लाभांशसमेत सूचीकृत भएको छ ।
सहमतिपछि जिप दुर्घटनामा मृत्यु हुने ९ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि
बझाङ : बझाङमा भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकामध्ये ९ जनाको बुधबार सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ। दुर्घटनामा..
मधेस आन्दोलनका घाइते पटेल अस्पतालमा अलपत्र, कसैले सहयोग गरेनन्
वीरगन्ज : मधेस आन्दोलनका गम्भीर घाइते मन्सी पटेल आर्थिक अभावमा अस्पतालमै अलपत्र परेका छन्। दुई सातादेखि प..
डोल्पा : जाजरकोट–डोल्पा सडक आयोजना सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक..
डा. निलम साह प्रकरण : दम्पतीबीच कुटाकुट
वीरगन्ज : वीरगन्जमा एक डा दम्पतीबीच पत्रकार सम्मेलनमै झडप भएको छ। दाइजो नपाएको निहुँमा श्रीमतीलाई यातना दिएको आर..
उदयपुरमा टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दियो, दुई जनाको घटनास्थलमै ज्यान गयो
उदयपुर : उदयपुर टिपरको ठक्‍करबाट बुधबार दुई जनाको घटनास्थलमा ज्यान गएको छ। जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका ७ लाटी..